Taageerida kafaalaqaadka adoon iibin naftaada | Martech Zone
iyada oo aan kafaalasho, ma haysan laheyn wax badan oo blog ah. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad ka faa'iideysanayso kafaala-qaadayaasheena, sidoo kale! Maalgelinta kafaala-qaadka, waxaan awoodnaa inaan sii wadno hagaajinta naqshadda goobta, soo-saarno noocyada mobilada iyo kaniiniyada, aan haysano podcast adag oo aan sii wadno ka shaqeynta astaamaha cusub - sida dib-u-habeynta barnaamijka emaylka iyo helitaanka codsi cusub oo mobilo ah. Maalgashigaas, dabcan, wuxuu kaloo caawiyaa kafaala-qaadayaasheenna intaan sii wadayno koritaanka iyo horumarka.
Maalgashiga ayaa faa iido leh. Waxaan haysannaa kafaala-qaadayaal badan hadda waxaanan kobcinnay baloogga si aad ah. odhaahda hadda waxaan ku jirnaa kaalinta 79aad ee adduunka marka ay timaado baloogyada suuqgeynta… ma aha wax aad u xishood badan oo ilaa 100 boos ah sanadkii la soo dhaafay! Waxaana jira baloogyo badan oo liiskaas ku jira oo runti aan diirada saarin suuqgeynta sidaa darteed runtii waxaan ku faraxsanahay waxqabadkaas.
Kafaalaqaadyada, ilaa hada, sidoo kale waxay ahaayeen shaqada ugu faa iidada badan ee aan qabanay ilaa maanta. In kasta oo xayeysiintu bixiso boqolaal doolar, kafaalo-qaadku wuxuu bixiyaa kumanaan. Ma ahan shaqo fudud, in kastoo. Kafaala-qaadayaasheena waxay helaan daryeel badan, kalgacal kalgacal leh. Laga soo bilaabo naqshadeynta infographic, la-tashiga suuq-geynta, waxay ku xusan tahay soo-bandhigeenna iyo soo-dejintooda, iyo meel kasta oo kale oo aan ku kala bixin karno wax soo saarkooda iyo adeegyadooda… waan sameynaa. Annaguna waligeen ma helayno kafaala-qaadayaal is khilaafsan. Marka qof kafaalo qaado qayb, iyagu waxay leeyihiin kafaalo qaadka inta ay jecel yihiin.
In kasta oo aan diirada saareyno xaqiijinta guuleystayaashayada, haddana ma iibinno nafteena, in kastoo.
Akhristayaasha balooggeena sida, taageere oo raac maxaa yeelay waxaan ku dhisnay aaminaad iyo amar gudaha suuqgeynta. Taasi waxay ka dhigan tahay, in kasta oo aan rabno inaan xaqiijino guusha kafaala qaadayaasheena, waa inaan aad uga taxaddarnaa waxyaabo yar:
Waa inaan markasta sheeg inuu jiro xiriir lacag leh oo lala yeesho kafaala-qaadayaasheena. Waxaan ka shaqeyneynaa inaan hubino in xusid kasta ay ku jirto ereyga “macmiil”… hubinta dhagaystayaasheena inay ogaadaan inay macmiil yihiin.
Waa inaan ka taxaddarnaa kafaala qaadayaasha aan haysanno. Waxaan aad uga taxaddarnay inaanan u fidinno kafaala-bixinno shirkadaha leh dhaqamada, wax soo saarka ama adeegyada shaki gelinta leh.
Waa inaan sii joognaa agnostic iibiya markay tahay soo tabinta macluumaadka warshadaha u qalma. Haddii tartamayaashayada kafaala qaadayaashu ay soo bandhigaan muuqaal aan caadi aheyn, waa inaan u sheegnaa dhagaystayaasheena.
Haddii aan halis u galno mid ka mid ah waxyaalahan, waxaan halis ugu jirnaa inaan lumino kalsoonida iyo awoodda ay qaadatay toban sano in la dhiso. Oo haddii aan lumino kalsoonidaas iyo awooddaas, waxaan waayi doonnaa dhagaystayaasheenna. Oo haddii aan wayno dhagaystayaashaas, waxaan waayi doonaa kafaala-qaadayaashaas! Wax dhibaato ah kuma qabo inaan u sharraxo kafaalaqaade sababta aan ula wadaagay macluumaadka ku saabsan badeecad ama adeeg war bixin ah.
Dhawaan, waxaan lahadlaayay blogger marti ah oo kamid ah blog warshadaha waawayn oo aan daabici doonin baloog uu isagu leeyahay maxaa yeelay waxay isku khilaafeen kafaalaqaadayaashooda. Ma akhriyo bartaas mar dambe. Ilaa iyo inta ay maamusho blogger-ka oo diiday qoraalka, weligey dib uma akhriyi doono. Waxay lumiyeen wixii iigu muhiimsanaa aniga… kalsoonidii iyo maamulkii aan moodayay inay haystaan. Hal shaqo joojin, way baxeen.
Weligaa ha u iibin naftaada kafaala-qaade!
Tags: marketingtikniyoolajiyadda suuqgeyntaTaageerokafaalasho